House of Cards ရာသီ ၅: ဖြန့်ချိသည့်နေ့၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာအားလုံး - Netflix သတင်း
House of Cards ရာသီ ၅: ဖြန့်ချိသည့်နေ့၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာအားလုံး
House of Cards- ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် - David Giesbrecht / Netflix
ဇွန်လ 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix ကထွက်ခွာဘာလဲ Netflix DVD နှင့်အတူ Thrones ဂိမ်းကိုကြည့်ပါ
House of Cards ရာသီ ၅ ရက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်နှင့်အချိန်၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် Netflix မူရင်းစီးရီး၏ရာသီသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအရာအားလုံး!
ဒါဟာကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည် ကဒ်အိမ် Netflix ကိုထိရန်ရာသီ5။ စီးရီး၏စတုတ္ထရာသီမတ်လ 2016 ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်နှင့်ပရိသတ်များအများအပြားရာသီဖြန့်ချိရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းစီးရီးကြည့်ရှုကြ၏။ နောက်ဆုံးတော့စောင့်ပါ ကဒ်အိမ် ရာသီ5အဆုံးသို့ရောက်ပြီ!
မင်းသိတဲ့အတိုင်း, ကဒ်အိမ် အားလုံးသည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ကောင်းစွာလက်ခံထားသော Netflix ၏မူရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Netflix သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအချို့သော hit show များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် နှင့် ကဒ်အိမ် streaming ကွန်ယက်အတွက်စတင်ခဲ့သည့်ပြပွဲများဖြစ်သည်။
၏ပထမလေးရာသီ ကဒ်အိမ် အခု Netflix ပေါ်မှာ streaming လုပ်နေပါတယ်။ ရာသီသစ်မတိုင်မီသင်အားလုံးဖမ်းဆီးခံရကြောင်းသေချာပါစေ။
သက်ဆိုင်သော: 15 ကတ်၏အိမ်အဘို့ရဲရင့်သောဟောကိန်းများရာသီ 5
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပျော့ပျောင်းသောရုတ်တရက်အချို့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အားလုံးကိုကြည့်ပြီးမကြည့်ပါက ကဒ်အိမ် ရာသီ (၄)၊ အောက်ပါနောက်တွဲတွဲပြီးနောက်စာမဖတ်ပါနှင့်။
ကဒ်အိမ် ရာသီ5Netflix အပေါ် Premieres 12:01 a.m. ပစိဖိတ်အချိန်မှာအင်္ဂါနေ့, မေလ 30 ရက်။ ကျနော်တို့ကတောင်, အလယ်ပိုင်း, ဒါမှမဟုတ်အရှေ့ကမ်းခြေအချိန်ဇုန်တွင်နေထိုင်သောသူတို့အဘို့အကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ကိုငါသိ၏။ Y'all သည်စီးရီးရာသီသစ်ကိုကြည့်ရှုရန်နောက်ကျ။ နေရမည်။
နည်းနည်းခက်ခဲအောင် Netflix ကဒီစီးရီးကိုအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်တော့မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က Netflix ဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကိုသောကြာနေ့မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။ ဒါကအမှုမဟုတ်ပါဘူး, ထိုသို့ဖျက်စီးသူတွေကိုရှောင်ရှားရန်ပရိသတ်တွေအများကြီးအဘို့အမှုအရာလှည်လုပ်သွားမယ့်။
များအတွက်တရားဝင်နောက်တွဲယာဉ် ကဒ်အိမ် မေလ ၁ ရက် Netflix YouTube ရုပ်သံလိုင်းကိုရာသီ ၅ ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ နောက်တွဲယာဉ်ကိုအကြိမ်ပေါင်း ၂ သန်းကျော်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးထိုအရေအတွက်သည်လာမည့်ရက်များအတွင်းဖြန့်ချိမည့်အချိန်အထိမြင့်တက်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ရသည်။
ကဒ်အိမ် ရာသီ ၅ သည်စတုတ္ထရာသီပြီးဆုံးချိန်တွင်စတင်သည်။ သင်မှတ်မိသည့်အတိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်အကျပ်အတည်း၏အလယ်တွင်ရှိနေပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များကဓားစာခံအချို့ကိုသတ်ဖြတ်မှုကို Underwoods ကစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် Frank သည် ICO နှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအကြမ်းဖက်သူများအားလုံး ၀ တိုက်ခိုက်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည် Underwoods the သမ္မတကိုအနိုင်ရသောသို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်သည်။
အယ်ဒီတာနှင့်သတင်းထောက် Tom Hammerschmidt သည်ဖရန့်ခ်၏နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းနှင့်ယခင်သမ္မတ Walker ကိုဖျက်ဆီးရန်သူ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဂျက်ကီ Sharp ကဒီဇာတ်လမ်းအတွက်စံချိန်တင်ခဲ့ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကို Remy Danton ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
Sherlock ရာသီ4American လွှတ်ပေးရန်
ကဒ်အိမ် ရာသီ ၅ သည်ဤနယ်မြေသုံးခု၌နေထိုင်သင့်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်၎င်း၏ရလဒ်များ၊ ဓားစာခံဓားစာခံအခြေအနေမှထွက်ပေါ်လာသည့်ရလဒ်များ၊
ပိုများသော netflix:35 ကဒ်၏အကောင်းဆုံးအိမ်ဇာတ်ကောင်
Netflix အတွက်စီးရီးကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးပထမဆုံးရာသီလေးရာသီအတွက်ပြသခဲ့သူ Beau Willimon သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီပြီးနောက်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ Melissa James Gibson နှင့် Frank Pugliese တို့သည်ပဉ္စမရာသီအတွက် Co-showrunners များဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပြပွဲသည် ဦး တည်ချက်အပြောင်းအလဲ (သို့) ပထမရာသီ (၄) ခုနှင့်မတူပါကပြissueနာကြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီပြောင်းရွှေ့မှုကောင်းမကောင်းဟုတ်မဟုတ်ပြောဖို့စောလွန်းသေးတယ်။ ကျနော်တို့မကြာမီထွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်!
Remy Danton ကိုကစားခဲ့သူ Mahershala Ali သည် House of Cards ရာသီ5တွင်ပြန်လာခြင်းမရှိသေးပါ။ ဂျက်ကီ Sharp တွင်ကစားခဲ့သော Molly Parker သည်အသွင်သဏ္makeာန်တစုံတရာရှိ၊ စတုတ်စီးရာသီအကုန်မှာသူတို့ရဲ့အပြောင်းအရွေ့ကိုအခြေခံပြီး၊
သင်္ဘောသားအဟောင်းအများစုသည်ရာသီဥတု ၅ နီးပါးခန့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသေနတ်ကြီးများဖြစ်သည့် Kevin Spacey နှင့် Frank နှင့် Claire Underwood အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသောရော်ဘင် Wright အပါအ ၀ င်။ သိသာ Meechum ဖယ်ထုတ်ထားဖရန့်ရဲ့အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်း, အားလုံးအဖြစ်ကောင်းစွာပဉ္စမရာသီပြန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့် Underwoods '' ရန်သူများကိုဖြစ်ကြသည်။
ဇာတ်ကောင်အသစ်များကိုစီးရီးရာသီတိုင်း၌မိတ်ဆက်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးမျက်နှာအသစ်များနှင့်တွေ့လိမ့်မည်သေချာသည်။ Netflix ၏အဆိုအရ Patricia Clarkson၊ James Martinez, Campbell Scott နှင့် Korey Jackson တို့သည်ရာသီသစ်အတွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Netflix သည်ဆof္ဌမရာသီအတွက် House of Card ကိုသက်တမ်းတိုးမထားပါ။ ဒါကမဆန်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ပြပွဲမှာ Netflix ကဒီစီးရီးကိုဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလိမ့်မယ်လို့သင်ထင်လိမ့်မယ်။ ကဒ်အိမ် နှင့် လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပထမ ဦး ဆုံးကြီးမားသော Netflix ပြပွဲခဲ့ကြသည်။ လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် လူသိရှင်ကြားအနည်းဆုံးသုံးရာသီအဘို့စာအုပ်တွေအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်, ငါတို့နေဆဲ၏အနာဂတ်အကြောင်းကိုမသိရပါဘူး ကဒ်အိမ်။
အဆိုပါလမ်းလျှောက်သေပြီရာသီ9ဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ရှု 3
ကျနော်တို့ကဒီအဆုံးသည်ဟုမဟုတ်ပါဘူး။ Netflix သည်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုလူသိရှင်ကြားကြေငြာခြင်းမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။
နောက်တဖန်သင်တို့ကို loop ၌မထား ကဒ်အိမ် သတင်း Netflix Life အပေါ်သင်သေချာအောင်လုပ်ပါ twitter နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်။
လူသတ်မှုရာသီ5ဇာတ်လမ်းတွဲ7ကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
တစ်ဦးကeရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ Netflix နှင့်အတူ Anne
netflix အပေါ် 100 အသစ်ရာသီ
Netflix hocus pocus ရှိပါဘူး